ऋग्वेद शर्मा/शिव बोहरा शुक्रबार, साउन १६, २०७७, १५:१२
काठमाडौं- अहिले प्रश्न उठाउन यति कठिन हुनेछ भनेर यो व्यवस्थाका लागि लड्नेहरुले कहिल्यै सोचेनन् होला। तर समयले यसरी कोल्टे फेर्‍यो कि गणतन्त्रमा नागरिकहरु प्रश्न गर्नबाट बञ्चित छन्।
सरकार काम राम्ररी गर, पारदर्शी होऊ भनेर आवाज उठाउन, प्रश्न गर्न, जवाफ माग्न पनि बन्देज हुने कस्तो समय हो, बुझ्न कठिन छ। कोरोना माहामारीले गाँजेको पाँच महिनाभन्दा बढि भइसक्यो। अवस्था सुधारतर्फ होइन झन खराब बनिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा माहामारीविरुद्ध सरकारको काम गराइ सुरुदेखि नै बिग्रिएको सबैले देखेकै छन्। सरकारी छलफलहरु पार्टी र पद जोगाउनमा केन्द्रित देखिन्छ। नागरिकको जीवन रक्षाको जिम्मेवारीमा निरन्तर झारा टार्ने काम भइरहेको छ। परीक्षणको दायरा घटाएर कोरोना संक्रमण कम गर्ने नीति अनौठो छ।
यसैले ‘इनअफ इज इनअफ’ अभियानमार्फत कोराना माहामारीमा सरकारको काम गराइप्रति युवाहरुले स्वतः स्फूर्त विरोध सुरु गरे। त्यसमा विभिन्न समय विभिन्न पार्टीको समर्थन पनि जोडियो। जेठ २७ गते बालुवाटाबाटै सुरु भएको विरोध प्रदर्शन देशभर फैलियो। पछिल्लो समयमा पाटन र बसन्तपुर केन्द्रित विरोध प्रदर्शन र सत्याग्रहलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ।
यसैले निरन्तर भइरहेका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजे बालुवाटारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तय भएको थियो। तर प्रदर्शन हुन पाएन। नागरिकहरुलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नबाट पनि रोकियो। युवा आजावको विरोधले बालुवाटारको निन्द्रा बिगार्न दिइएन।
बिहान ११ बजे अगावैदेखि बालुवाटार वरपर हरेक चोकमा खटिएका प्रहरीले प्रदर्शनमा जानै नदिन हरेकलाई पक्राउ गर्दा प्रदर्शन हुन नपाएको हो। प्रहरीले युवा उमेरका हरेकलाई रोक्ने र पक्राउ गर्ने गरिरहँदा प्रदर्शनकारी एक ठाउँ जम्मा हुनै पाएनन्। प्रदर्शनबारे थाहै नपाएका बटुवासमेत प्रहरीको धरपकडमा परे।
काम विशेषले हिँडेका हरेकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक समाजमा प्रश्नदेखिको डर भन्दा बढी के होला र? उनीहरु प्रश्न गरिरहेका थिए- ‘यो बाटो हिँड्नै नपाइने किन हो? यो बाटो मेरो होइन? मलाई किन समातिएको हो?’
बालुवाटारमा युवालाई हिँड्नै निषेध, देख्यो कि धरपकड [फोटोफिचर]शुक्रबार, साउन १६, २०७७
भित्रि बाटोमार्फत बालुवाटार नजिक पुगेका केही युवालाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै लैजाने गरिरह्यो। लगातार बाटोमा देखिने हरेकलाई पक्राउ गर्दा बालुवाटारमा केहीबेर स्थिति तनावग्रस्त देखियो। ठूलो संख्यामा रहेका प्रहरीले कोरोना जोखिम बढ्न नदिन आफूहरुले प्रदर्शन रोकेको बताइरहेका थिए। तर प्रहरीको धरपकडले भिड एकत्रित भइरहेको थियो।
यसअघि बालुवाटारमा नै प्रदर्शन हुँदा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुलाई दुवैतर्फबाट घेरेर एक ठाउँ जम्मा पार्ने र पानीका फोहोरा र अश्रुग्यासले तितरवितर पार्ने गरिरहेको थियो। तर शुक्रबार भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुनसमेत दिइएन।
‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ताहरु अहिले पनि बसन्तपुरमा १३ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन्। यसअघिको सत्याग्रहमा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले नै भेटेर माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर राजनीतिक परिस्थितिबाट ध्यान भड्काउने भन्दा बढी त्यसको उपादेयता देखिएन। प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासन अनुसार सरकारको काम गराइमा सुधार हुन सकेको छैन।
कोरोना माहामारीका कारण सिर्जित परिस्थितिमा सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेका उदाहरण हजार छन्। युवाहरुले ती काम राम्ररी गर भनेका हुन्। यो महामारीमा पनि भ्रष्टाचारका घृणित खेल छन्, त्यो बन्द गर भनेका हुन्। जोखिमको अवस्था बुझेर पनि उनीहरु किन सडकमा निस्किन बाध्य भएका छन् भन्नेतर्फ पनि विचार हुनुपर्ला।
उनीहरुले निरन्तर उठाइरहेका मागहरु व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, शतप्रतिशत पिसिआर परीक्षण, आरडिटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने, खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने लगायत नै हुन्। यसमा सरकारविरुद्ध होइन सरकारको काम गराइको विरोध भइरहेका हुन्। सरकार धरपकडमा उत्रिँदा स्वास्थ्यसँग जोडिएका विरोध राजनीतिसँग जोडिने पुग्ने जोखिम रहन्छ।
पछिल्लो समय हरेक विषय राष्ट्रवादसँग जोड्दै को देशद्रोही र को राष्ट्रवादी भनेर छाप लगाउन तँछाडमछाड गरिरहेकाले बुझ्नुपर्छ देशको माया गर्नु र सत्ताको नाकामीमा प्रश्न सोध्नु फरक विषय हुन्। आवाजदेखि डराउने शासक, प्रश्न वर्जित समाज कम्तिमा अहिलेलाई त सुहाउँदैन।
गलतलाई गलत भनेर आवाज उठाउनेलाई सरकारले किन आफ्नो विरोध गरेको बुझिरहेको हो, यकिन छैन। शुक्रबार बालुवाटारमा जे भयो त्यो यो समयलाई सुहाउने काम होइन।
बालुवाटार अगाडि निषेधित क्षेत्र तोकिएको भए पनि शिवपुरी विद्यालय अगाडिदेखि यता भाटभटेनीसम्म नै हिँडहुल कठिन थियो। सोधपुछ र धरपकड हेर्दा देश संकटकालको कठिन समयमा भएको भान हुन्थ्यो। एक-एक गरेरै सय जनाभन्दा बढी पक्राउ परे। अरु तितरबितर पारिए।
प्रहरीले सबैतिरबाट रोकिरहँदा पनि बालुवाटार नजिक पुगेका केही प्रदर्शनकारी सडकमा एक्लै नारा लगाउँदै पक्राउ पनि परिरहेका थिए। आवाज दबाउने गलत तरिकाले उनीहरुको आवाज अझ चर्को भइरहेको थियो। त्यसैले स्वास्थ्यसम्बद्ध मागहरुमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको आवाजसमेत मिसियो।
स्वतस्फूर्त रुपमा आएका युवासँगै विवेकशील पार्टीकी रञ्जु दर्शना र पूर्वमन्त्री हिसिला यमी पनि देखिए। त्यहीँ योङ कंग्रेसका युवाहरु पनि सामेल भए। रञ्जु पक्राउ परिन् भने हिसिलालाई प्रहरीले छाडिदियो।
‘नेपालीहरुलाई कोभिडबाट बचाउनुपर्छ भनेर नै हामीले भनेको हो। स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न पाउने अधिकार छ, यो गणतन्त्र संघीयता यो लोकतन्त्रको अनुहारको आधारमा नै यिनीहरु आएका हुन्। यो सबैको सुरक्षाको लागि आएको कुरा हो। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा मेरो ऐकेबद्धता छ। यो देश फासिजमतिर जानु भएन’ हिसिलाले प्रश्न गरिन्।
पूर्वमन्त्री भएकाले पनि हो कि प्रश्न गर्ने छुट हिसिलालाई भने देखियो। सडकपेटीमा हिँडिरहेका बटुवासमेत पक्राउ परिरहँदा सडकमा नै विरोधको नारा लगाएर हिसिला सहज रुपमा घर फर्कन सकिन्।
शान्तिपूर्ण प्रश्नहरु बर्जित गर्दा यसले उचित भविष्य दिलाउँदैन नै। सडक पेटीको बार भत्काउने र टायर बाल्नेबाट फेरिएको प्रदर्शनमाथिको वेवास्ताले विरोधको शैली फेर्न चाहानेलाई पनि कमजोर पारिरहेको छ। गलतलाई गलत भन्न सक्ने आवाजहरु कमजोर भएको भान भइरहेको छ। बोल्नु जोखिम मोल्नु भइदिँदा कोही किन बोलोस्?
भिडियोमा हेर्नुहोस् बालुवाटारमा धरपकड